TidyMarketer: Suuq-geynta SaaS ee Dhammaan-In-One Suuq loogu talagalay Ololayaasha Xayeysiinta | Martech Zone
Kharashka warbaahinta adduunka ayaa sii kordhaya heerka 5.1%, oo la filayo inuu gaaro $ Trillion 2.1 ee 2019, sida uu sheegayo McKinsey. Xayeysiinta dhijitaalka ah ee loo qoondeeyay dhaaf TV kharashka in 2018. TidyMarketer ayaa bilaabay xal olole suuq geyn ah oo leh qorshe dhisme warbaahineed, kalandarka ololaha, warbixinno otomaatig ah iyo waxyaabo kale oo badan, oo loogu talagalay iskaashiga kooxaha suuq geynta iyo hay'adaha.
Barxadda SaaS waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay qorsheeyaan, isku duwo, wada shaqeeyaan, oo ay ka miisaamaan dhammaan maareynta ololaha hal madal. Waxaa loogu talagalay inay ka caawiso suuqleyda inay ololeyaal guuleysi ah ka sameeyaan suuqgeynta iimaylka illaa warbaahinta bulshada, soo bandhigida xayeysiinta, PR, dhacdooyinka iyo waxyaabo kale oo badan.
TidyMarketer's otomaatig ah Qorshaha Warbaahinta, oo lagu rakibo astaamaha iyo qaacidooyinka KPI, ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay abuuraan oo la jaan qaadaan xeeladaha ololaha, iyagoo adeegsanaya qoondeyn miisaaniyadeed iyo waxqabad olole oo caan ku ah saadaalinta natiijooyinka ololaha. Tani waxay noqon kartaa iibinta khadka tooska ah, rakibida barnaamijka mobilada, raadadka ama wax ka badan.
TidyMarketer muuqaalada waxaa ka mid ah
Qorshooyinka Suuqgeynta - waxay u oggolaaneysaa kooxaha inay dhisaan qorshooyin suuq geyn dhameystiran, oo ay ku dhameystiran yihiin muuqaallo cad, oo ay ku jiraan natiijooyinka la saadaaliyay iyo maalgashiga warbaahinta, oo diyaar u ah inay la wadaagaan kooxaha gudaha ama macaamiisha dibadda. Qalabka otomaatigga ah wuxuu meesha ka saarayaa baahida loo qabo warbixinnada gacanta, tanina waxay ka caawineysaa shirkadaha inay hagaajiyaan shaqadooda, yareeyaan halista khaladka aadanaha iyo ugu dambayntii inay miisaamaan hawlgallada.
Jadwalka Ololaha - jiidi oo hoos u dhig astaamaha iyo ogeysiisyada degdegga ah, macnaheedu waa kooxaha ayaa isku duwi kara ololeyaal badan hal meel oo bartamaha ah.
Task Manager - wuxuu awood u siinayaa dadka isticmaala inay hawlo u xilsaaraan xubnaha isla markaana maareeyaan qandaraaslayaasha dibadda iyo hay'adaha.
$ 25 / bishii, tiknoolajiyada bulshada ee awood u siineysa barnaamijka SaaS waxay u oggolaanaysaa suuqleyda inay qorsheeyaan, isku duwo oo ay maamusho ololeyaasha, dhammaantood iyada oo loo marayo hal meel oo dhexdhexaad ah, oo si fudud loo isticmaali karo. Waxaa loogu talagalay inay ka caawiso suuqleyda inay ololeyaal guuleysi ah ka sameeyaan suuqgeynta iimaylka illaa warbaahinta bulshada, soo bandhigida xayeysiinta, PR, dhacdooyinka iyo waxyaabo kale oo badan. TidyMarketer sidoo kale waxay bixisaa xalka hay'adda.
Saxiix u TidyMarketer
Shaacinta: Waxaan u adeegsaneynaa xiriiriye ku xiran TidyMarketer qodobkan
Tags: kalandarka ololahaqorshaynta ololahamaareeyaha hawsha ololahaxayeysiiska dhijitaalka ahbandhig xayeysiisEmail Marketingdhacdooyinkaqorshaha suuqgeyntaprwarbaahinta bulshadatidymarketer
Gurigaaga Suuqgeyntu Ma Lagu Dhisay Dhagax Ama Ciid?